म्याक्सिम गार्कीको विश्वप्रख्यात उपन्यास आमाको नेपाली अनुवाद भाग- ४ - Gaule News
म्याक्सिम गार्कीको विश्वप्रख्यात उपन्यास आमाको नेपाली अनुवाद भाग- ४
मानिसहरुले उडाएको त्यो दूषित हल्ला घरवरिपरि मडारिँदै थियो । मान्छेहरु घाँटीमाथि रहेको त्यस घरभित्र जुन रहस्यमय कुरा लुकेर रहेको थियो त्यसलाई कुनै तरिको आतङ्कित गरेर बाहिर निकाल्न चाहन्थे र राती उनीहरु झ्यालभित्र चियाउँथे । कहिलेकाहीँ त झ्यालको ऐना पनि खटखटाउँथे, तर तुरुन्तै भागी पनि हाल्थे ।
बस्तीको छेउमा रहेको त्यो सानो घरतिर मानिसहरुको ध्यान आकर्षित हुन थाल्यो । दर्जनौं जासुसी आँखाहरु त्यस घरको भित्ता छेडेर भित्र चियाउन चाहन्थे । मानिसहरुले उडाएको त्यो दूषित हल्ला घरवरिपरि मडारिँदै थियो । मान्छेहरु घाँटीमाथि रहेको त्यस घरभित्र जुन रहस्यमय कुरा लुकेर रहेको थियो त्यसलाई कुनै तरिको आतङ्कित गरेर बाहिर निकाल्न चाहन्थे र राती उनीहरु झ्यालभित्र चियाउँथे । कहिलेकाहीँ त झ्यालको ऐना पनि खटखटाउँथे, तर तुरुन्तै भागी पनि हाल्थे ।
एक दिन भट्टीको मालिक बेगुन्चोभले पेलागेया नीलोभ्नालाई बाटामा रोक्यो । त्यो बूढो हेर्दा त निकै असल मान्छेजस्तो देखिन्थ्यो । उसले सधैं बैजनी रङको मखमलको इस्टकोट लगाएको हुन्थ्यो र उसको रातो चाउरे गर्धनमा एउटा कालो रेशमी रुमाल बाँधिएको हुन्थ्यो । यसको चम्किलो चुच्चे नाकमा कछुवाको हाडले बनेका चस्मा हुन्थ्यो, त्यसैले मान्छेहरुले उसको नाम पनि “हाडका आँखा” राखेका थिए ।
उसले उत्तरको प्रतीक्षा नै नगरी एकै सासमा आमामाथि शब्दहरुको वर्षा गर्न थाल्यो –
“पेलागेया नीलोभ्ना, के छ हालखबर ? छोरो के गर्दै छ नि ? उसको बिहे गर्ने विचार छैन कि क्या हो ? केटालाई बिहे गरिदिने बेला भैसक्यो । जति छिटो छोराछोरीको बिहे गरिदिन्छन्, आमाबाबुले त्यत्तिकै छिटो चैन पाउँछन् । मान्छेका लागि गृहस्थी त्यत्तिकै लाभदायक हुन्छ, जति दापभित्र खुकुरी जोगिन्छ । तपाईको ठाउँमा म भएको भए त बिहे गरिदिइसक्थेँ होला उसको । जमानै यस्तो भैसकेको छ, सधैं विचार गर्नुपर्छ को कसरी दिन बिताउँदैछ । मानिसहरु मनपरी तरिकाले बस्न थालेका छन् । उट्पट्याङ कुराहरु सोच्न थालेका छन् र काम पनि त्यस्तै गर्छन् । युवकहरु गिर्जाघर जान छाडे र मानिसहरुको भीडबाट भागीभागी हिँड्न थालेका छन् । अँध्यारा कुनाकाप्चाहरुमा लुकीलुकी आफ्ना रहस्यहरुबारे कानेखुसी गर्छन् । म सोध्छु किन यो खस्याकखुसुक ? किन मानिसहरुबाट भागीभागी हिँड्छन् ? के पो त्यस्तो कुरा हो, जो उनीहरु सबैका अगाडि भट्टीमा भन्न डराउँछन् ? कुनै गोप्य कुरा त होइन ?
गोप्य कुरा बताउने त एउटै मात्र ठाउँ छ, त्यो हो पवित्र गिर्जाघर । यो कुनाकाप्चामा लुकेर खस्याकखुसुक गर्ने बानी त दिमागको खराबी हो । लौ त पेलागेया नीलोभ्ना, तपाईको भलो होस् ।”
उसले आफ्नो टोपी फुकालेर हल्लायो र हिँडी पनि हाल्यो । आमा आश्चर्यचकित भएर त्यहीँ उभिइरहिन् ।
फेरि एकपल्ट यस्तै घटना घट्यो – भ्लासोभ परिवारको छिमेकी मारिया कोर्सुनोभाले, जो एक लोहारकी विधवा थियन् र फैक्ट्रीाको ढोकामा खानेकुरा बेचेर आफ्नो पेट पाल्थिन्, बजारमा पेलागेया नीलोभ्नालाई भेट्टाइन् । उनले भनिन् –
“पेलागेया, आफ्नो छोराको हेरविचार गर्नु है !”
“किन र ?” आमाले सोृधिन् ।
“म त नानाथरीका कुरा सुन्छु है !” मारियाले बडो रहस्यपूर्ण तरिकाले भनिन् । “बडो खराब कुरा सुन्छु, बुझ्यौ आमै ! सुन्छु, ऊ कुनै गोप्य सङ्गठन खडा गर्दै छ, फ्लैगलान्तहरुजस्तो । भन्छन् – उनीहरुले पनि फलैगलान्तहरुले जस्तै एक दोस्राको छाला उखेल्नेछन् ।”
“छोड मारिया, किन व्यर्थको बकवास गछ्र्यो ।”
“बिनाआगो धुवाँ आउँदैन ।” पसल्नीले भनिन् ।
आमाले यी सबै कुरा छोरालाई बताइन्, तर उसले खाली कुम मात्र हल्लायो, उक्राइनि चाहिँ सधैंजस्तो आफ्नो कोमल आवाजमा मस्तसित हाँस्न थाल्यो ।
“केटीहरु पनि खुब रिसाएका छन् तिमीहरुसँग ।” आमाले भनिन् – “तिमीहरुजस्ता केटाहरुसँग बिहे गर्न पाए कुनै पनि केटीहरुले आफूलाई भाग्यमानी ठान्नेछन् । तिमीहरु मेहनती छौ, रक्सी पिउँदैनौं, तर केटीहरुको चाहिँ अलिकति पनि वास्ता गर्दैनौ । मानिसहरु भन्छन्, सहरबाट खराब केटीहरु तिमीहरुसँग भेट्न आउने गर्छन् .. ।”
“लौ भयो अब ।” पाभेलले मुख बिगार्दै भन्यो ।
“धापमा सबै कुरा गन्हाउँछ ।” ऊक्राइनिले लामो सास फेर्दै थियो । “आमै, भनिदिनोस् न यी उल्लू केटीहरुलार्य बिहे गरेपछि के दुर्गति हुन्छ ? नत्र फाँसीमा लट्किन त्यत्ति हतारो गर्दैनथे होलान् .. ।”
“हे भगवान्, उनीहरुलाई सबै कुरा थाहा छ, सबै बुझ्छन् । तर अर्को बाटो नै के छ र ?” आमाले भनिन् ।
“यदि उनीहरुले बुझेका भए अर्को बाटो भेट्टाइहाल्थे नि ।” पाभेलले भन्यो ।
आमाले छोराको गम्भीर अनुहारतिर हेर्दै भनिन् –
“तिमीहरु किन पढाउन्नौ यी केटीहरुलाई ? उनीहरुमध्ये अलि समझदार भएकाहरुलाई यहाँ डाक्ने गर न !”
“बेकार छ ।” छोराले रुख ो स्वरमा जवाफ दियो ।
“कोसिस गरेर हेरे कस्तो होला ?” उक्राइनिले सोध्यो ।
एकछिन चुप लागिसकेपछि पाभेलले जवाफ दियो –
“एक दोस्रासँग घुमफिर गर्न थाल्नेछन् । अनि कसैकसैले बिहे पनि गर्नेछन् । त्यसपछि किस्सा खत्तम भैहाल्छ ।”
आमा सोच्न थालिन् । पाभेलको यो महात्माको जस्तो नीरसताले उनी चिन्तित हुन थालेकी थिइन् । उनी देख्थिन् – उसका सबै साथीहरु, उक्राइनिजस्ता ऊभन्दा बढी उमेर भएका साथीहरु ऊसँग सल्लाह माग्ने गर्थै । उनलाई लाग्थ्यो – सबै उसँग डराउँछन् र उसको यस गम्भीरताले गर्दा कसैले पनि उसलाई मन पराउँदैन ।
एक दिन राती उनी पल्टिसकेकी थिइन्, पाभेल र उक्राइनि अझ पढ्दै थिए, पातलो भित्तापारी उनीहरुले सानो स्वरमा कुरा गरेका सुनिनु् ।
“थाहा छ, मलाई नातासा मन पर्छ ।” अचानक उक्राइनिले भन्यो ।
“मलार्य थाहा छ ।” पाभेलले एकछिनपछि जवाफ दियो ।
आमाले सुनिन्, उक्राइनि बिस्तारै उठेर नाङ्गा खुट्टा कोठामा ओहोरदोहोर गर्दै छ । उसले एकदमै सानो स्वरमा कुनै उदास धुनको सिटी बजाउन थाल्यो, अनि अकस्मात् थामियो र सानो स्वरमा भन्यो –
“उनले चाल पाएकी होली यो कुरा ?”
पाभेल चुप थियो ।
“मस्तो लाग्छ तिमीलार्य ?” आफ्नो स्वर अझ सानो पार्दै उसले सोध्यो ।
“चाल पाएकी छे ।” पाभेलले जवाफ दियो । त्यसैले त यता आउन छाडेकी हो ।”
उक्राइनि बिस्तारै कोठामा घुम्दै थियो र कोठामा फेरि उसको सिटीको हल्का स्वर गुन्जियो ।
“सिधै कुरा गरे कस्तो होला ?” उक्राइनिले बिस्तारै सोध्यो ।
“यही कि म उनीसँग – ।” उक्राइनिले अझ सानो स्वरमा भन्यो ।
“के काम ?” पाभेलले उसलाई बीचैमा रोक्दै सोध्यो ।
आमाले अन्दाज लगाइन्, उक्राइनिले ओहोरदोहोर गर्न बन्द ग¥यो र उनलाई लाग्दै थियो, ऊ उभिएर मुस्कुराइरहेको छ ।
“मलाई लाग्छ, यदि कसैले कुनै केटीसँग प्रेम गर्छ भने उसलार्य यो कुरा बताइदिनुपर्छ नत्र यसको कुनै नतिजा निस्कँदैन ।”
पाभेलले जोटले आफ्नो किताब बन्द ग¥यो ।
“त्यसो भए कुन नतिजा तिमी चाहन्छौ ?” उसले सोध्यो ।
दुवै जना धेरै बेरसम्म चुप लागे ।
“भन न ! उक्राइनिले सोृध्यो ।
“आन्द्रेइ, तिमीलाई स्पष्ट रुपमा थाहा हुनुपर्छ, तिमी के चाहन्छौ ?” – पाभेलले बिस्तारै भन्यो । “लौ, मानौं ऊ पनि तिमीलाई प्रेम गर्छे, हुन त यस कुरामा मलाई शङ्कै लाग्छ, तैपनि मानौं यस्तै हो रे – अनि तिमीहरुको बिहे हुनेछ । बडो मजाको जोडी ठहरिनेछ – उनी बुद्धिजीवी र तिमी चाहिँ साधारण मजदुर ! त्यसपछि केटाकेटी जन्मन थाल्नेछन् । परिवारको पेट पाल्न रातदिन रगतपसिना चुहाउनुपर्नेछ । दालभात, कोटाकेटी र डेराको जन्जालमा तिमी कसरी फँस्नेछौ भने हाम्रो उद्देश्यका लागि काम गर्ने कुनै समय तिमीहरुसँग बाँकी रहने छैन र तिमीहरु दुवै जना खत्तम हुनेछौ !”
एकछिन कोठामा कुनै आवाज सुनिएन । फेरि पाभेलको आवाज सुनियो । यसपल्ट उसको आवाज त्यत्ति कठोर थिएन ।
“आन्द्रेइ, छोड तिमी यी सबै कुरा । उनका लागि पनि कठिनाइ पैदा नगर .. ।”
दुवै चुप थिए । घडीको टिकटिक आवाज स्पष्ट सुनिँदै थियो, समय बित्दै थियो ।
उक्राइनिले भन्यो –
“आधा हृदयले प्रेम गर्छ, आधा हृदयले घृणा गर्छ, यस्तो पनि हृदय हुन्छ ?”
किताबको पाना पल्टाएको आवाज सुनियो । आमाले सोचिन्, पाभेल फेरि किताब पढ्न थालेछ । उनी आँखा बद गरेर पल्टेकी थिइन् – सास फेर्नसम्म पनि हिचकिचाउँदै थिइन् । उनी उक्राइनिका लागि दुःखित थिइन्, उनको हृदय रुँदै थियो, तर आफ्नो छोराका लागि बढी चिन्तित थिइन् ।
“बिचरो, मेरो प्यारो छोरो ।” आमा सोच्दै थिइन् ।
“त्यसो भए तिम्रो बिचारमा मैले चुप लागेर बस्नु नै बेस छ ?” – अचानक उक्राइनिले सोध्यो ।
“यो बढी इमान्दारी ठहरिनेछ ।” पाभेलले शान्तिपूर्वक जवाफ दियो ।
“ठीक छ, त्यस्तै गर्नुपर्ला !” उक्राइनिले भन्यो । एकछिनपछि उसले बिस्तारै ठूलो निराशा भरिएको आवाजले भन्यो – “पाभेल, कुनै दिन तिमीमाथि पनि यस्तै आइप¥यो भने थाहा पाउनेछौ कति गाह्रो पर्दो रहेछ .. ।”
“थाहा पाउन थालिसकेको छु .. ।”
घरको भित्तामा हावा ठक्कर खाँदै थियो । घडीको टिकटिक आवाजले समय बितेको सूचना दिँदै थियो ।
“यो कुनै ठट्टा गर्ने कुरा होइन !” उक्राइनिले बिस्तारै भन्यो ।
आमा तकियामा मुख गाडेर चुपचाप रुँदै थिइन् ।
बिहान उनलाई लाग्यो, आन्दे्रइ पहिलेभन्दा होचो देखिन थालेको छ र झन् मायालाग्दो भएको छ । दुब्लो, पातलो पाभेल सधैंजस्तो चुपचाप थियो । आमा उक्राइनिलार्ई सधैं आन्द्रेइ ओनीसिमोभिच भनेर डाक्ने गर्थिन्, तर आज चालै नपाई उनले भनिन् –
“आन्द्रेइ, आफ्नो जुत्ता मर्मत गर्न लाउनू, नत्र बिरामी पर्नेछौ ।”
“तलब पाएपछि नयाँ जुत्ता किन्छु ।” उसले हाँस्दै भन्यो । अनि अकस्मात् आफ्नो लामो हात आमाको काँधमा राख्दै सोध्यो – “तपाई नै मेरी साँच्चीको आमा हुनुपर्छ । तर तपार्य यो कुरा स्वीकार गर्न चाहनुहुन्न । म असाध्यै कुरुप भएकाले त होइन, लौ भन्नोस् त ?”
आमाले चुपचाप उसको हात थपथपाइन् । उनी उसलाई धेरै स्नेहपूर्ण कुराहरु भन्न चाहन्थिन्, तर उनको मुटु वेदनाले भरिएको थियो र मुखबाट शब्द निस्कन सकेन ।
नृत्य निर्देशक संघ नेपाल,भक्तपुर शाखाको सम्मान तथा बधाई कार्यक्रम सम्पन्न
किराती सेलीब्रेटीका प्रायोजनमा साकेला कविता प्रतियोगीता सम्पन्न
तस्विरमा यस्तो देखियो जनजाति महासंघको महाधिवेशन
‘दंगल’बाट आमिरले व्यक्तिगत कमाए २४० करोड
नवलपरासीमा छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा दुईको मृत्यु
भारतले नेपाली बुलेटमार्फत् ग्यास ढुवानीको अनुमति दिएन